Daily News on August 05_ 2012
Daily News on August 05, 2012
-   KNU and Government to hammer out ceasefire ‘code of conduct’ detail
-   တတိယ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် KNU နှင့် အစိုးရတို့ အကြိုညှိနှိုင်း
-   အစိုးရနှင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်
-   လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ကေအဲန်ယူ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံ။
-   KIA အဆိုပြုသော ရွှေလီကို အစိုးရဖက်မှ ငြင်းဆို
ကရင်နီနှင့် မွန်အဖွ့တို့ ကလေးစစ်သား အသုံးမပြုရေး လက်မှတ်ရေးထိုး
-   မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးရန် ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းပြော
-   နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ဟု ကင်တားနား ပြောကြား
-   သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင် များနှင့် တွေ့ဆုံ
-   Myanmar president stresses common goal with political parties
ရခိုင်ပဋိပက္ခ သီးခြားလွတ်လပ်စာ စုံစမ်းရေး ကင်တားနားတောင်းဆို
-   MSF urges to reconsider aid ban
-   UN: Burma Still Has Serious Rights Challenges
KNU and Government to hammer out ceasefire ‘code of conduct’ detail
August5| Author: Eh Na
The Burmese government and the Karen National
Union (KNU) will meet on 27 August in Hpa-an to
discussanewly drafted ‘ceasefire code of conduct’ that
has been prepared by the Karen National Union.
Meeting today in the Burma border town of Myawaddy,
both sides agreed to meet again to negotiate the detail of the
‘cease-fire code of conduct’.
Naw Zipporah Sein, the KNU general secretary, told Karen
“We agreed that we will discuss further the issue of the security for civilians, the guarantee for civilian security
and the issue ofacode of conduct that was agree at the second round of ‘peace talks’ in April this year.”
Naw Zipporah Sein said also on the agenda for discussion will be the withdrawal of Burma Army soldiers that
are causing concerns for villagers who live in close proximity to the army camps.
“We will also discuss the issue with the government to get them to withdraw their troops and bases near to Karen
villages or close to the villages.”
In today’s meeting, Naw Zipporah Sein, led five KNU representatives and the Burma government’s Minister for
Rail Transportation, U Aung Min, led eight representative.
On April 6, the KNU and the Burma government heldasecond round of ceasefire talks in Rangoon – both sides
reached agreement on 13 points including the ‘ceasefire code of conduct’ that is suppose to guarantee security
for Karen civilians. In January 2012 the KNU reachedahistorical ceasefire with the Burma government after
more than 60 years of civil war.
တတိယ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ အတွက် KNU နှင့် အစိုးရတို့ အကြိုညှိနှိုင်း
Sunday, 05 August 2012 17:35 , Written by ဖြူဖြူကို
ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ခွမှ နေ လည် ၂ နာရီ အချိန်အထိ အစိုးရ မီးရထား ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်း
ရေးဖေါ်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ် အဖွ့သည် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး ( KNU ) ခေါင်းဆောင်များနှင့် တတိယ အကြိမ်
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အကြိုဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရန် ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့တွင် တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြသည်ဟု ဤဆွေးနွေးပွဲ
အတွက် ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ နော်မေဦးက ပြောပါသည်။
“ကျမတို့က နောက်ထပ် တွေ့ဆုံဖို့ က ဒီလထဲမှာပဲ ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမှာ ထပ်ပြီး ဆွေးနွေးမယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ဘက်က
ပြင်ဆင် ထားတာကို သူတို့ကို အရင်ပြောပြတယ် သူတို့ဘက် ကလည်း ကြိုပြီး သိထားရင် ပြင်ဆင်လို့ရအောင် ပါ။ ဒါကြောင့်
နောက်ထပ် တွေ့ဆုံမှုအတွက် နှစ်ဖက်အဆင် ပြေချောမွေ့ရေးကို ညှိနှိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ” သူက ပြောပါသည်။
ဤအကြိုဆွေးနွေးပွဲသည် အစိုးရနှင့် KNU ကြား တတိယ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အောက်ပါအချက် (၂) ချက်ကို ညှိနှိုင်း
၁) ပြည်သူလူထု ဘ၀ လုံခြုံမှုကို အာမခံ ရရှိရန်အတွက် ကျေးရွာနှင့် ပြည်သလူထုကြားတွင် ရှိနေသော အစိုးရ တပ်များ
ရုပ်သိမ်းပေးရန် နှင့် လျော့ချပေးရန်။
၂) ယခင် ဒုတိယ အကြိမ် တွေ့ဆုံစဉ်က ဆုံးဖြတ် ထားသည့်အတိုင်း နှစ်ဘက်တပ်များ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည့် ကျင့်ဝတ် များကို
တတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ၌ ထပ်မံ ဆွေးနွေးရန် အတွက် ပြင်ဆင်ထားရန် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
“ရည်ရယ်တာက အစိုးရတပ်တွေ ကျမတို့ လက်နက်ကိုင် တပ်တွေနဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင် ပြီးတော့ ပြည်သူလူထု
တွေရဲ့ အခွင့်ရေးကို မထိပါးရလေအောင် အားမခံနိုင်ဖို့အတွက် လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ လိုပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို
လာမယ့်ပွဲမှာ ဆွေးနွေးမယ်လို့တင်ပြတာပါ။ ဒါက ဒုတိယ အကြိမ်
ဆွေးနွေးပွဲတုန်းက ရရှိထားတဲ့ သဘောတူညီချက် အပေါ်မှာပဲ
ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ ဒါကိုပြန်လည် အသိပေးတာပါ။ ဒါမှဆွေး
နွေးပွဲရက်ကတို မယ်လေ” ဟု ဆိုပါသည်။
နော်စီဖိုးရာစိန်နှင့် ဦးအောင်မင်းတို့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့၌ တွေ့ဆုံစဉ်
ထို့အပြင် KNU ကရင် အမျိုးသား အစည်းရုံးသည် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ အချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်လာသည့်အခါ ထိုပြသနာမျိုးကို
မည်သို့ ကိုယ်တယ် ဖြေရှင်းကြရမည့် နည်းလမ်းများကို တင်ပြပြီး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ပြည် တွင်း ပြည်ပ
စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လူထု ဘ၀ လုံခြုံရေးကို အာမခံချက် မရှိသေးသည့် အချိန်တွင် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
လုပ်သင့် မလုပ်သင့် အခြေအနေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
KNU သည် အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး ခိုင်မာမှု မရှိသေးသည့် ကာလ ပတ်လုံး ပြည်ထောင်စုအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေး နွေးမှုများ
တက်လှမ်းနိုင်မည် မဟုတ် သေးဟုဆိုပါသည်။
ယခုကျင်းပသည့် အကြို ဆွေးနွေးပွတွင် မြန်မာ အစိုးရဘက်မှ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးခင်ရီ၊ ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်
ဦးဇော်မင်းတို့ ပါဝင်ပြီး KNU ဘက်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်၊ နော်မေဦး၊ ပဒို သောသီဘွဲ၊ စောအောင်ဝင်းရွှေ တို့
၄ ဦး တက်ရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ KNU နှင့် အစိုးရတို့၏ တတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲရက် ကို အချိန် အတိအကျ မသတ်မှတ်
ရသေးသော်လည်း လာမည့် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၃ ရက်နေ့ အထိဖြစ်နိုင် သည်ဟု ခန့်မှန်း ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရနှင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်
မဲဆောက်၊ သြဂုတ် ၅ ။ သတင်း၊ ဓါတ်ပုံ - ရဲရင့်မောင်
အစိုးရနှင့်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့အကြား
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာအလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ကို ယနေ့နံနက် ၁၁
နာရီခန့်က ကရင်ပြည်နယ်မြ၀တီမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ရေးဖေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီဒုဥက္ကဌ ရထားပိုဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဦးခင်ရီ၊ပြည်ထောင်စု
၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းနှင့် ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးဇော်မင်းတို့
ယခုလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၃ ရက်နေ့အထိ ကရင်ပြည်နယ်
အလွတ်ဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယနေ့ဆွေးနွေး ပွဲတွင်
ပါဝင်သည့် KNU ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ
၎င်းက”ဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတာက လာမဲ့ခရီးစဉ်အတွက်အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးကြတာပါ”ဟုပေါ်ပြူလာနယူးစ်ဂျာနယ်
သို့ပြောသည်။ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွင် KNU ဘက်မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနော်စီဖိုးရာစိန်၊ ပဒိုသောသီဘွဲ၊ နော်မေဦးမူတရော်
နှင့်စောအောင်ဝင်းရွှေတို့ပါရှိပြီး ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲသွားရောက်ရန် အတွက် ၎င်းတို့ ၄ ဦးအပါအ၀င်
ကိုယ်စား လှယ် ၉ ဦးရွေးချယ်ထားသည်ဟုသိရသည်။
မြ၀တီမြို့တွင်ပြုလုပ်သည့် အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲကို မူလအစီအစဉ်အရမဲဆောက်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ရန်
သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ထိုင်းဘက်မှကန့်သတ်မှုအချို့ကြောင့် မြ၀တီတွင်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲ
KNU လက်အောက်ခံတပ်မဟာ ၆ နှင့်တပ်မဟာ ၇ တို့သည် မြန်မာအစိုးရနှင့်ဆက်သွယ်မည့် ဆက်ဆံရေး ရုံးကိုမြ၀တီမြို့၌ယခုလ
၁၈ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ရန်ရှိသည်ဟုလည်း တပ်မဟာ ၇ မှအရာရှိတဦးကပြော သည်။
လိက်နာရမည့်ကျင်ဝတ်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ကေအဲန်ယူ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံ။
လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ကရင်ပြည် နယ်၊
ဖားအံမြို့တွင် သြဂုတ်လ ၂၇ရက်နေ့မှစ၍ သုံးရက်ကြာ
ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်၊
မြ၀တီမြို့ရှိ အေးချမ်းဖြိုးဧည့်ရိပ်သာတွင် ယနေ့
ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် အလွတ်သဘော ဆွေးနွေးပွတွင်
ပြောဆိုခြဲ့ က ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်သူ နော်မေဦး “ကျမတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ သဘောတူ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အတိုင်း နှစ်ဘက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ လိုက်နာရမဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့
ဆွေးနွေးမယ်”ဟု ကရင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
၎င်းအပြင် တတိယအကြိမ် ကေအဲန်ယူနှင့် မြန်မာအစိုးရ ထပ်မံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် တပ်အရွှေ့အပြောင်းနှင့်
တပ်ရုပ်သိမ်းရေးကိစ္စ များကိုလည်း အဓိကအားဖြင့် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း နော်မေဦးက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“အဓိကကတော့ ဒုတိယအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ နှစ်ဘက်တပ်တွေလိုက်နာရမဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့
ဒီတပ်အရွှေ့အ ပြောင်း တပ်ရုပ်သိမ်းရေးတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်တယ်”ဟု ဆိုသည်။
နေ့လည် ၁၁နာရီကျော်မှစတင်၍ နာရီကျော်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယနေ့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကေအဲန်ယူဘက်မှ အတွင်းရေးမှူးချုပ်
နော်စီဖိုးရာ စိန်၊ ပဒိုစောသောသီဘွဲ၊ နော်မေဦးနှင့် စောအောင်ဝင်းရွှေတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အစိုးရဘက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး
ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ မီးရထားဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ၊
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်းတို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာအီးဂရက် ကုမ္ပဏီမှ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်၊ ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ဦးတင်မောင်သန်း၊ ထားဝယ်မင်းသမီး ကုမ္ပဏီမှ
ဦးငွေစိုး၊ ဦးကိုကိုမောင်နှင့် ဇနီး မစုတို့က ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်များအဖြစ် ယနေ့ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့်အတူ ပါလာသည့် ဇနီး ဒေါက်တာဝေေ၀သာနှင့် မန္တလေးဆေး
တက္ကသိုလ် မှ ဒေါက်တာစောကလော်ခို့၊ မြ၀တီဆေးရုံမှ ဒေါက်တာခင်မောင်မြင့်နှင့် ဒေါက်တာဇင်လတ်မောင်တို့သည်
မဲဆောက်မြို့သို့လာရောက် ကာ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် ဦးဆောင်သည့် မယ်တော်ဆေးခန်းအဖွဲ့နှင့် တစ်နာရီခွဲကြာ
အဆိုပါ တွေ့ဆုံမှုတွင် အရေးပေါ်လူနာ ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအသိအမှတ်ပြုမှုကိစ္စနှင့်မွေးမှတ်တမ်းရှိသူများ
ကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမည့်ကိစ္စများကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ၀ါရင့်ကျန်းမာရေး
တာဝန်ခံတစ်ဦးက ကရင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“အဓိက အဲဒီသုံးချက်ကိုပဲ ဆွေးနွေးသွားတာပါ။ အရေးပေါ်လူနာဆိုရင်လည်း အထူးသဖြင့် မွေးလူနာတွေပေါ့။နောက်ပြီးဒေါက်တာ
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ဦးခင်ရီတို့သည် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်နှင့်
မဲဆောက်မြို့တွင် တွေ့ဆုံခြဲ့ ပီး မယ်တော်ဆေးခန်းကို လေ့လာကြည့်ရှုကာ ဘတ်ငွေ တစ်သိန်းခွဲ လှူဒါန်းခဲ့သေးသည်။
ကေအဲန်ယူနှင့် မြန်မာအစိုးရသည် ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ရက်နေ့က ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ကရင်ပြည်နယ်၊
ဖားအံ မြို့တွင်လည်းကောင်း၊ ဧပြီလ ၆ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊
စီဒိုးနားဟို တယ်တွင်လည်းကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
KIA အဆိုပြုသော ရွှေလီကို အစိုးရဖက်မှ ငြင်းဆို
Sunday, 05 August 2012 16:21 ယ Written by ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန
ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည့် နေရာကို အစိုးရ ကမ်းလှမ်းသည့် အတိုင်း မူဆယ်မြို့၌ ကျင်းပရေးကို ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး
တပ်မတော် (KIA) က လက်ခံ ပါက ဆွေးနွေးရန် အသင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း
ကော်မီတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင် မင်းက သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့ စက်မှု ၀န်ကြီး ဌာန၌ ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု
ကော်မီရှင် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဂျာနယ်၏ မေးမြန်းချက်ကို အထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ဒီလိုပါ မူဆယ်မှာဆွေးနွေးပါလို့ KIA နဲ့ပြောထားတယ်။ သူတို့ကမဟုတ်ဘူး ရွှေလီလို့ပြောတယ်။ အခုသွားမှာက ၀န်ကြီး တွေ၊
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းတို့ပါတော့ သူများနိုင်ငံမှာ ဆွေးနွေးတာ မကောင်းဘူးလေ။ မူဆယ်ဖက်လာဖို့ ပြောထားတယ်။ ဒီတခါတော့
တပ်တွေနေရာချမှာ တပ်တွေ နေရာချပြီးရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းပြီးပေါ့။ သူတို့ဖက်က နေရာရပြီးရင် အဲဒီနေရာကို အတည်ပြုပြီးတာနဲ့
သွားကြမယ်” ဟု ဦးအောင်မင်းက ဆိုပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည့် နေရာကို ရွှေလီ၌ ကျင်းပရန် ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် (၂၀) ရက်နေ့ကတည်းက အစိုးရစေလွှတ်လာသော
ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်များနှင့် KIA က အဆိုပြု ထားခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်မင်းတို့သည် ဤအဆိုပြုချက်ကို သြဂုတ်လ
(၁)ရက်နေ့၌ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မူဆယ်နေရာသည် KIA နှင့် အစိုးရတပ်အကြား တိုက်ပွဲပြင်း ထန်သည့်နေ
ရာဖြစ်သဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ မလုပ်နိုင်ကြောင်း KIA က ပယ်ချထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။
အစိုးရ တပ်စစ်ဆင်ရေးနှင့် ထိုးစစ်ဟန်ရှိနေသရွေ့
အစိုးရ၏ အသစ် ထပ်မံ အဆိုပြုချက်ကို တုန့်ပြန်ရန် KIA
ဖက်က အစည်းအဝေး ကျင်းပနေသည်ဟု
ပြောပါသည်။ သမ္မတသည်လည်း KIA နှင့် မကြာမီ
နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ သော တိုင်းရင်းသား (၁၄) ပါတီ
ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အစိုးရသည် ကချင်ပြည်၏ အခြေအနေကို လေ့လာရန် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တာ နားကို
ဖိတ်ကြား ထားခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဇူလိုင်လ (၃၀)နှင့် သြဂုတ် (၄)ရက်နေ့အကြား ကချင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက် ရန်
ရှိသော်လည်း ယနေ့ထိ သွားရောက်မည့်အရိပ်အရောင် မမြင်ရသေးပေ။
အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသားအပေါ် ထားရှိသည့် သဘောထားရှိသည် KIA အပေါ် ကိုင်တွယ်မှုက သက်သေပြသွားမည်ဟု Myanmar
Peace Support Initiative (MPSI) က ယူဆနေပါသည်။ ဤအဖွဲ့သည် နော်ဝေးနိုင်ငံက ပံ့ပိုးမှုပေးပြီး မြန် မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး
ဖြစ်စဉ်ကို အနီးကပ်အကူအညီ ပေးလျှက် ရှိပါသည်။
ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ) | တနင်္ဂနွေနေ့၊ သြဂုတ်လ ၀၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၀၀ နာရီ ၁၇ မိနစ်
စံခလပူရီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကရင်နီ တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) တို့သည် ကလေးစစ်သား
အသုံးမပြုရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ အဖဲ့အစည်း တခုဖြစ်သည့် Geneva Call နှင့် အချက် ၆ ချက်ပါ စာချွန်လွှာအား
သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့က လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်ဟု KNPP အတွင်းရေးမှူး (၂) ဦးအောင်ဆန်းမြင့် က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ဆီမှာ လက်ရှိအထိတော့ ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးစစ်သားတွေ တယောက်မှ မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဒါကို သက်သေပြ
အာမခံမှု ပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီစာချွန်လွှာကို လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ စာချွန်လွှာအား လွန်ခ့သည့် အစောပိုင်းနှစ်များက ပအိုဝ်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PNLO) နှင့် ပလောင်
အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (PSLO) တို့လည်း လက်မှတ် ရေးထိုးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော်လည်း KNU, KNPP နှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ အပါအဝင် အစိုးရတပ်မှပါ ကလေး စစ်သားး အသုံးပြုနေကြဆဲ
ဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာများ၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ ဖော်ပြနေကြ
ကြောင်း ဦးအောင်ဆန်းမြင့် က ဆိုသည်။
KNPP သည် ကလေးအခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ UNICEF နှင့်လည်း အစောပိုင်း နှစ်များ၌
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဦးအောင်ဆန်းမြင့် က ပြောသည်။
လက်မှတ် ရေးထိုးရာတွင် ပါဝင်သည့် အဓိက အချက်များမှာ စစ်ပွဲတွင် ကလေးများ မပါဝင် မပတ်သက်စေရန်၊ စစ်ဆင်သည့်အခါ
ကလေးများကို ရှောင်ရှားရန်၊ စစ်ဇုန်များ၌ ကလေးများ မပါဝင် စေရန်၊ ကလေးများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ချုပ်နှောင်ခြင်း
ထားရလျှင်လည်း လူသားဆန်စာ ပြုမှုဆက်ဆံ ရန်နှင့် သေဒဏ် မပေးမိစေရန် အပါအဝင် ကလေးအခွင့်အရေးများကို
အကာအကွယ် ပေးနိုင်ရန် အတွက် အာမခံချက်ပြုသည့် အချက် ၆ ချက် ပါဝင်သည်။
ယင်းစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသို့ Geneva Call မှ သဘောတူညီ
ချက်အတိုင်း မှန်/မမှန် လာရောက်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ရေးကို ခွင့်ပြုပေးရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အချက်အလက်
အစီရင်ခံစာများကိုလည်း တင်ပြပေးရမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်းကလည်း ကလေးစစ်သား အသုံးမပြုရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများကိုလည်း KNPP ဗဟိုဌာနချုပ်၌
Geneva Call မှ နှစ်ကြိမ် သင်တန်းပေးပြီး ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ အဖွ့အစည်းအတွင်း၌ ကလေးစစ်သား အသုံးပြုမှု မရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များအား လာရောက် စစ်ဆေးရန်
ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော်လည်း လာရောက်ခြဲ့ ခင်း မရှိဟု ဦးအောင်ဆန်းမြင့်မှ ပြောသည်။
အဆိုပါ စာချွန်လွှာအား ဂျီနီဗာမြို့၌ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဘက်မှ နိုင်ငံခြားနှင့် မဟာမိတ် ဆက်ဆံရေးရုံး တာဝန်ခံ
နိုင်ဟံသာ (ဗိုန်ခိုင်) က လည်းကောင်း၊ ကရင်နီ တိုးတက်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး (၁) ခူဦးရယ်နှင့် အမြဲတမ်း ဗဟိုကော်မတီဝင်
ရီမင်ထူး က လည်းကောင်း အသီးသီး သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးရန် ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ
Written by သဇင်ဥ           Sunday, 05 August 2012 10:36
ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအား လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်း
အထူးရဟန်ယာဉ် ၂ စီးဖြင့် စစ်တွေမှ ဘူးသီးတောင်-မောင်တော-မြောက်ဦး-မဟာမုနိ-ကျောက်တော်မှ စစ်တွေတွင် ယမန်နေ့က
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းနှင့်အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဦးကိုကိုနိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးလှမောင်တင်၊
ဒုဝန်ကြီး (၁၀)ဦးခန့်၊ ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီး ဦးလှမြင့် အပါအ၀င် နယ်စပ်ရေးရာ၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးများ လိုက်ပါ
လာကြောင်းနှင့် မောင်တောမြို့နယ်မှ ဒုက္ခသည်များအား အကူအညီပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းဦးဆောင်သော အဖွ့သည် စစ်တွေမြို့လေဆိပ်သို့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မောင်တောမြို့သို့ ၁၁
နာရီတွင် ဆိုက်ရောက်လာကာ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ဘူးသီးတောင်-မြောက်ဦးမြို့ မြို့နယ်များမှတဆင့် လည့်လည်သားခဲ့ခြင်း
&quot; ဒေသခံများနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို တွေ့ဆုံပြီး အားပေးစကားတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ကျွဲနွားတွေ ဆုံးရှုံးသွားမှုအပေါ်
လယ်ထန်စက်တွေ ကူညီဆောင်ရက်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊ ဒေသခံတွေကို ပိုမိုတိုးတက်တဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေ
လုပ်ပေးဖို့ ပြောဆိုခ့ပါတယ်၊ အကူညီတွေပေးအပ်ခ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ &quot; ဟု နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း မောင်တောမြို့- အလယ်သံကျော် ခရီးစဉ်တွင် ခြားစားမှုဖြင့် ပြောင်းရွေ့အရေးယူ ခံနေရသော
နစကကွပ်ကဲရေးမှူး ဦးအောင်ကြီး နေရာသို့ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့က ပြောင်းရွေ့လာသူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး(၄၀)နှစ်
အနီးကပ် လိုက်ပါခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးများ တာဝန်ယူပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်မှ ခြစားမှုဖြင့် အရေးယူထားသော ဦးအောင်ကြီးထံမှ မြေပေါ် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ အား
သိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းထံမှ မြေအောက်ဘဏ္ဍာများအား သိမ်းဆည်းနိုင်မှုများလည်းရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းအား
အရေးယူမည် အခြေအနေကို မသိရှိရသေးကြောင်း မောင်တောမြို့နယ် နစကသတင်းရပ်ကွက်များက ဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးမှာ သံတြွဲ မို့နယ်မှ ရခိုင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီး မောင်တောမြို့နယ် ဒေသခံများအနေဖြင့် ပြန်လည်ထူ
ထောင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အားပေးအားမြောက် ပြုလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်နေကြသည်ဟု မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
&quot; ဒုသမ္မတကြီးက အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ လူရိုးတစ်ဦးလို့ မြင်ပါတယ်၊ သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အမှန်အတိုင်း အကူအညီတွေ ရမယ်လို့
မျှော်လင့်ပါတယ်၊ သူကြားနေတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရတာ လွဲချော်မှုတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်လို့ သူသုံးသပ်ပါတယ်၊
သူအမှန်ကို ကူညီဖို့ အတန်တန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ &quot; ဟု မောင်တောမြို့နယ်မှ အနီးကပ် လုံခြုံရေး အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း အနေဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပားသည့် အဖြစ်အမှန်အတိုင်း သိရှိနိုင်ရန်၊ ဒုက္ခရောက်နေကြသော
ဒုက္ခသည်များ၏ လတ်တလော အကူအညီလိုအပ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ
လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လေ့လာစစ်ဆေးဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပားသည့် အမှန်အတိုင်း အခြေအနေများကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ရှေ့ပြေးအ
နေဖြင့် ရောက်ရှိလာကြောင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဦးသိန်းစိန် လာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ဖွယ် အခြေအနေများ
မောင်တောမြို့နယ်မှ နိုင်ငံရေးဝါရင့်တစ်ဦးက &quot; UNကိုယ်စားလှယ် ကင်တင်းနား ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လာရောက်လေ့လာတာဟာ
သီးသန့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူ မူဆလင်အရေးကို တဖက်သတ် စိတ်ဝင်တစား ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ၊ ရခိုင်ပြည်နဲ့
ဖြစ်ပားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခအဖြေမှန်အတွက် မည်သို့မှအကျိုးမရှိပေ၊ တခါတည်းမှာ မြန်မာပြည်နဲ့ လူထုတွေအတွက်ပါ
အကျိုးကိုယုတ်စေမဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ &quot; ဟု ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း မောင်တောမြို့တွင် ရှိနေစဉ်
ဖုံးမှတဆင့် ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို လိုက်သည်။
ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ၂ ရက်တာခရီးစဉ် လေ့လာရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်တွေမြို့တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ဒုက္ခသည်အခြေအနေများကို စုံစမ်းမေးမြန်းလေ့လာ၍ ပြန်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းက &quot; ခုဖြစ်ပျက်ခ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာတယ်၊ အကြမ်းဖက်တာဟာ ဘယ်နေရာကိုထိ ထိခိုက်
တယ်ဆိုတာကို လူတိုင်း အထူးသဖြင့် အစိုးရအဖွ့တွေ သိမှာပါ၊ ပြီးတော့ ဒေသအတွင်းမှာ ခြစားမှု၊ သွေးထိုးလှုံဆော်မှု၊ ကျူးကျော်
၀င်ရောက်ပြီး နိုင်ငံတော် အချုပ်အခြာအာဏာကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတာကာက အစွန်းရောက်တွေရဲ့ အာဘော်တွေ ဘယ်လို
ပုံစံရှိနေတယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်ခ့ပါတယ်၊ ဒါမြန်မာနိုင်ငံ ခရီးဆက်ဖို့ အခွင့်ကောင်းတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ ဆိုရပါမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့
တကယ့်ကို နိုင်ငံတော်အနှံအပြားကို ထူထောင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ &quot; ဟု သုံးသပ်ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော ဘင်္ဂလာအာဏာပိုင်က ယင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိနေသည်ဟု
ယူဆရသော နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေသည့် ဘင်္ဂလာတွင်အခြေစိုက် ပြင်သစ်မှ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့(MSF)၊
ငတ်မတ်ခေါင်းပါးမှု ကူညီရေးအဖွဲ့ (ACF)နှင့် ဗြိတိန်အခြေစိုက် မူဆလင်ကူညီရေးအဖွဲ့ (Muslin Aid UK)တို့အား
ဆက်လက်ပြီးမြန်မာမှ ရောက်ရှိလာမည့် မူဆလင်များအား ကူညီမှုမပြုလုပ်ရန် အကြိမ်ကြိမ် တားမြစ်မှုများ ရှိနေသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၀န်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina က Al Jazeera တီဗီသတင်းသို့ ၎င်းတို့မှာ ဆေးဝါး၊ ငွေကြေး၊ စက်နှင့်အတူ
ဘုတ်များအပြင် ရိက္ခာ အစရှိသည်များ ကူညီပေးနေကြောင်း၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေဖြင့် တာဝန်မရှိကြောင်း၊ မြန်မာမှာသာ
တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ဘင်္ဂလာတွင် ဒုက္ခသည်စခန်း များအတွင်း ၃၀၀၀၀၀ ရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အတင်းအဓမ္မ
စေလွှတ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း လွန်ခ့သော ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့က လန်ဒန်မြို့တွင် ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့
အကူအညီများ လုံးဝမပေးရန် NGOများကို တရားဝင်ပေးစာများ ပေးပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဇွန် ၈ ရက်နေ့က ပဋိပက္ခကြောင့် မြန်မာမှ ဘင်္ဂလာသို့ ကျူးကျော်လာသူများဟု စွပ်စွဲပြီး
ဘင်္ဂလာကမ်းခြေစောင့် တပ်ဖ့နှင့် နယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက နှစ်လကာလတွင် စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီးရမိသူများ ၂၂၀၀
ကျော်တို့အား တရားမ၀င် ပို့ဆောင်ခ့ကြောင်းနှင့် မသင်္ခါသူတချို့အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး အရေးယူမှုများ
ပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြောင်း ဒေသထုတ် သတင်းစာနှင့် ၀ပ်စာမျက်နှာများ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရှိရသည်။
နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ဟု ကင်တားနား ပြောကြား
ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံများ အရေးဖြေရှင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို
ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန် မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားက
မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်၌ သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့ က ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင်
&quot;ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေ နိုင်ငံသား မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုခံရမှုတွေ၊
ခြွဲ ခားဆက်ဆံခံရတာတွေ၊ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားခွင့် မရမှုတွေ အတွက် ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား
ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်တယ်။ သူတို့တွေကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဆင့်နဲ့
တပြေးညီ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရမယ်&quot; ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် လူ့သားချင်းစာနာထောက်ထားသော အကူညီများပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည့်အပြင်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး
ခိုင်မာလာရန်နှင့် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး တို့တွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပက်သက်ပြီး ပိုမိုအလေးပေး ဆောင်ရွက်သား
ရန်လိုအပ်ကြောင်း သောမတ်စ် အိုဟေးကင်တားနားက ထပ်မံ တိုက်တွန်းသွားသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အတွက်လည်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့်
အကူညီများပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အကူအညီများ လိုအပ်နေသော အချိန်မျိုးတွင် လိုအပ်သည့် အကူအညီများကို
အလျင်အမြန်ရရှိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသွား ရန် အရေးကြီးကြောင်း ၄င်းက ထပ်မံ အကြံပြုသည်။
ခိုးဝင်လာသော ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံများသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိတိုင်းရင်းသားများကိုသာ တာဝန်ယူ
သွားမည်ဖြစ်ပြီး ခိုးဝင်လာသည့် ရိုဟင်ဂျာများကို UNHCR (ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး) သို့ အပ်နှံပြီး
ဒုက္ခသည် စခန်းအဖြစ်ထားရှိကာ UNHCR ကကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ထားရန်နှင့် တတိယနိုင်ငံများက လက်ခံမည်ဆိုပါက
ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဇူလိုင်လ ၁၁၇က်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ
မဟာမင်းကြီး Mr. Antonio Guterres ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅မျိုးတွင် လုံးဝ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ်
လက်ခံရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဇူလိုင်လ
၃၀ရက်နေ့က နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင်ပြုလုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုလုပ် သော
သတင်းစာရှင်းလင်းပွတွင် သတင်းစာဆရာများကို တရားဝင်ပြောကြားခဲ့သည်။
သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား၏ တိုက်တန်းချက်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခများကို တည်ငြိမ် အောင်
ဖြေရှင်းသော နည်းလမ်း မဟုတ်ရုံသာမက ဆူပူမှု ဖြစ်အောင် သွေးထိုးလှုံဆော် သကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ယင်း
တိုက်တန်းချက်သည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံတော် ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်နေပြီး နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ
အာဏာကို ထိပါးလာစေသော တိုက်တန်း ချက်သာဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ အထွေထွေ
အတွင်းရေးမှူး ဦးဦးလှစောက ဝေဖန်သည်။
“လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခုတည်းနဲ့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ မျိုးတုံးသွားမယ့် ကိစ္စကတော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူး။
ကင်တားနား အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားဖို့လိုတယ်“ ဟု ၄င်းက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားသည် လူ့အခွင့်
အရေးချိုးဖောက် မှုများကို လေ့လာရန် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဇူလိုင်လ ၃၀ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့တွင်
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ထွက်ခွါ သွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ရဲ့ရင့် ပြတ်သားစွာ ပြောကြားချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း၊ UNHCR မဟာ မင်းကြီး
ပြောကြားသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး ပြောကြားချက်အား ကန့်ကွတ် ရှုတ်ချသော အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ
ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ရုံးရှေ့တွင် သြဂုတ်လ ၃ရက်နေ့က ဆန္ဒ ပြပြွဲ ဖစ်ပွားခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင် များနှင့် တွေ့ဆုံ
Sunday, 05 August 2012 15:10 , Written by ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် (၁၉၉၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပါတီများ အပါဝင် လက်ရှိ တိုင်းရင်းသား ပါတီမှ ခေါင်းဆောင်
များနှင့် နိုင်ငံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ယမန်နေ့ နံက် (၉) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် စက်မှု လယ်ယာစနစ်
တောင်သူ ပညာပေး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
သမ္မတသည်၊ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသော ဒီမိုကရေစီ စနစ်သည်၊ အနောက် နိုင်ငံများ၌ ကျင့်သုံးနေသော ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့်
အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရှင်သန်ရေးသည် တိုင်းပြည်အေးချမ်းရေးအပေါ်၌ မူတည်ကြောင်း၊
ပြောခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် လောလောဆယ် အစိုးရ အနေဖြင့် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်
ကိုင် အင်အားစုများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါသည်။
သို့သော်လည်း KIO/KIA တို့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး မတည်ဆောက်နိုင်သေးသော်လည်း ၄င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများနှင့်
အဆက်အသွယ် ရှိနေကြောင်း ဆိုပါသည်။ တိုင်းပြည်အေးချမ်းတည်ငြိမ်ရေးသည် အမျိုးသားရေး တာဝန် တရပ်ဖြစ် သည်
နှင့်အညီ ပါတီအားလုံး လက်တြွဲ ပီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် လိုကြောင်း သမ္မတက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းရင်းသား ပါတီ (၁၄) ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား များ
ဒီမိုကရေစီ အဖွ့ချုပ်မှ ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထန်းဦး၊ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်း ညွန့်လွင်၊ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ
ဦးအေးသာအောင်၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညတ်ရေးပါတီမှ ဦးဟန်ရွှေနှင့် ဦးသိန်းထွန်း၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဌ
ဦးစောထွန်းအောင်မြင့်၊ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ဥက္ကဌ ဦးဇင် အောင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ဥက္ကဌ
ဦးသိန်းညွန့်နှင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှ ဦးတင် ၀င်း၊ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးနို ထန်ခပ်၊
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွ့ချုပ် ဦးဂျင်ကမ်းလျန်၊ ပအိုဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ဦးနေ ၀င်းထွန်း၊ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေးပါတီမှ
ဦးအောင်မျိုးဦး၊ မွန်ဒီမိုကရေစီ ပါတီမှ နိုင်ကျော်ဝင်း၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ ပါတီ ဥက္ကဌဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့် မြန်မာ အမျိုးသား
ကွန်ဂရက် ပါတီမှ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ္ဋ်တို့ တက်ရောက်ပါသည်။
ထိုပါတီခေါင်းဆောင်များသည်၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကိစ္စများကို
ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်ဟု သမ္မတရုံး ၀က်ဆိုဒ် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်းများ
ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ အစိုးရဖက်မှ ပြည်ထောင်စု
ရွေးကောက်ပွဲကော်မီရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး၊
စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဦးလှမောင်ရွှေ၊
သမ္မတသည် စီးပွားရေး ကိစ္စများ၊
အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ၏ တင်ပြချက်များကို လောလောဆယ်
မသိရှိရသေးပြသဖြင့် မတင်ပြနိုင်သေးပေ။ အစိုးရ သည်၎င်းတို့၏ ပေါ်လစီသစ်ကို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များကိုလည်း ဖွင့်ချပေးပြီး
လိုရာကို အသုံးချသွားမည်ဟု ယူဆရပါသည်။
အစိုးရသစ်သည် အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီ စနစ်အတိုင်း မဟုတ်ဟု အကြောင်းပြပြီး ခုတုံးလုပ်ပြီး မိမိတို့လိုရာအတိုင်း
ပေါ်လစီအဟောင်းကို အသစ်ယောင်ဆောင်ကာ စစ်အာဏာရှင် အသွင်သစ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်သွားဖွယ် ရှိနေသည်ဟု
Myanmar president stresses common goal with political parties
YANGON, Aug.5(Xinhua) -- Myanmar President U Thein Sein has urged political parties in the country to
cooperate with the government in working foracommon goal which comprises three points, namely political
stability, eternal peace with armed ethnic groups and socio-economic development in the country.
&quot;If there are those who row back while paddling towards the goal, the travel to the goal would be delayed and it
would be difficult to reach the goal,&quot; Thein Sein warned atarare meeting with leadership of 14 political parties
in Nay Pyi Taw Saturday.
&quot;With democracy in its infancy, the country must take every step cautiously . Historical background and customs
of its nationals will shape Myanmar&#39;s democracy model,&quot; he said.
Giving top priority to stability, Thein Sein stressed the importance to maintain the stability as well as to make
peace with ethnic armed groups.
He emphasized the vital role played by political parties in stabilizing the political conditions of the country.
Terming peace pursuit with armed groups as an extremely sensitive issue, Thein Sein blamed that &quot;However
hard the higher level has tried, the efforts have often come to nothing once there emerges malfunctioning at the
lower level, resulting in vain and decrease in trust&quot;.
He underlined that the government has made peace with 10 out of 11 ethnic armed groups, achieving certain
progress, but agreement has not been reached yet with the Kachin Independence Army (KIA) in northern Kachin
He urged political parties to make joint efforts in this regard.
Relating to socio-economic development issue, he called for efforts in creating jobs as much as possible, citing
that the poverty rate of the country stands at 26 percent, affected by low employment rate, forcing about three
million of its citizens to work overseas for survival.
He stressed the need to address the issue through inviting foreign investment, disclosing that foreign investment
bill has been written to be commensurate with that of foreign countries and submitted to the parliament.
He revealed that arrangements have been made to systematically use the foreign grants and loans in projects
which would benefit the people, citing the building of small and medium industries, heavy industries and hi-tech
industries such as IT and telecommunications with the aim of adding value to the products of the country.
Noting the impossibility for the new government, which has turned just overayear, to fulfill the need of the
country at once, Thein Sein invited advice to the government on ways for sufficient power supply instead of
launching protest, calling for spending its budget to build basic infrastructures.
Citing the current per capital income which is around 800 U.S. dollars, he pointed out that despite being rich in
natural resources and in possession of sound foundation, the country is ranked at the bottom of the list of per
capital income in the ASEAN nations and even lower than neighboring Bangladesh.
He spoke out that the government wants the per capital income to reach about 3,000 U.S. dollars if possible, and
the five-year plan is aimed at increasing 7.7 percent GDP within five years.
He called for stepping up efforts 1.3 times of the present efforts to reach the goal.
&quot;If we want to reach the GDP up to 3,000 U.S. dollars, the country must boost efforts three times higher than the
present efforts,&quot; he maintained.
To realize this, he expects grants and low-interest loans and investment from foreign countries to flow into the
country and Western nations remove sanctions and the European Union accepts imports from Myanmar and
allows Myanmar to re-apply the tax exemption system.
He called on all participants to work in unison and in cooperation with each other until the country reaches its
The 14 political parties which gathered with the president included Shan Nationalities League for Democracy,
Rakhine League for Democracy, National Unity Party, Kayin People&#39;s Party, Myanmar New Society Democratic
Party, National Democracy Party, National Political Alliance League, Chin Progressive Party, Zomi League for
Democracy, Pa-O National League, Diversity and Peace Party, Mon Democracy Party, Modern People&#39;s Party
and Myanmar National Congress Party.
The meeting took place onabreak day during the ongoing 4th session of the parliament.
Since U Thein Sein&#39;s civilian government took office in March 2011, the government has been carrying out
major reform both politically and economically.
The by-elections in April this year indicated that the government has paved way for inclusiveness of all political
parties, analysts said.
4                                 2012 - 23:45 GMT
!                                                    &quot;   #$%          &amp;%                   %&#39;#                    (           (                                 % )
* (                       +          ,       ,%                   +               -                $                   . / %               %                                                0          1             ,        ,
#$%       &amp;%                   2+1           -                                                . / (                  *                     ,                            -%                   %&#39;* +0
%                 +       $!                                #           1                                                      +$
* (                  4               %        %5                                                                     /            -6
(         * -               %                (            ,%                                    #$%                      $
%&#39;#                                    ,%              %                %                     $                    7
(         ,                        (#                           &#39;                   . /                                         ,
%         %         $                   8(                                                                                         1     (3
%         %             $ 9:;&lt;             !                           %                =      4                         *             +$              %        ,                    !
#$%       &amp;%                         &gt;?                % %                                      +$                 %                                     1    (3 %             /               !                             %                            $
* @)                        #                          %           0!                                         #$%      &amp;%                                         (           &amp;                            -                                  *
A                                                       $                                . /                                                                       1       /
41              %                                     ,           +                                 ,                       -          $ 5+                          1    (3                      * (                                   / B
%                                                          $           A            -           ,        $                                           +                        8/8/ /                                         1           (3
9:;&lt;                        !                =            4               *                                            %        $5                              +           &amp;        8#641)                                                   !                         A
%2%                   $                    . / =                4C                      &#39;                     +                                                                                                      1           /
41              %                         8/8/ /                                       1       (3
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပားခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ အဖွ့ကနေ စုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးနိုင်ရေး မြန်မာနိုင်ငံဆင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်
တောမတ်စ်အိုဟေးကင်တားနား (Tomas Ojea Qintana) က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး
အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို အကဲခတ် ဆန်းစစ်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို တပတ်ကြာခရီး ရောက်ရှိနေချိန်မှာ မစ္စတာ ကင်တားနားက
အခုလို ပန်ကြားလိုက်တာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး ဆူပူမှုတွေ တည်ငြိမ်ရေး အတွက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အဆမတန်
အင်အားသုံးခဲ့တာတွေ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း မစ္စတာ ကင်တားနားက သူ့ရဲ့ ၆
ရက်ကြာ ခရီးစဉ် အဆုံးသတ်တဲ့နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွမှာ
ပြောဆိုသွားတာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူ့အခွင့်အရေး
ချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ ချက်ချင်း
မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အမှန်အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ
တဘက်နဲ့တဘက် ချဲ့ကား စွပ်စွဲပြောဆိုတာတွေ
ရှိနေတာကြောင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက်
အလားအလာ မကောင်းဘဲ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နိုင်သလို
တင်းမာမှုတွေလည်း တိုးလာနိုင်တယ်လို့ မစ္စတာ
“လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို သီးခြား လွတ်လပ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အဖွဲ့ ဖြွဲ့ ပီး အမြန်ဆုံး
စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေက တောင်းဆိုနေသလိုပဲ ကျနော်ကလည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ကျနော့်အနေနဲ့ အထောက်အကူ ပေးနိုင်ပါတယ်။”
မစ္စတာ ကင်တားနား ဟာ ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးတင်မကဘဲ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ
လွှတ်ပေးရေးကိုလည်း တိုက်တွန်းခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေ ရှေ့ရှုတဲ့နေရာမှာ လူ့အခွင့်အရေး
တိုးတက်ဖို့က အခရာကျတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောသွားပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိန်ခေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေသေးပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ
အသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုတယ်
ဆိုတာကို ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြဿနာတွေက သရုပ်ဖော် ပြသလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
မစ္စတာ ကင်တားနားက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေနဲ့ မိလ္လာ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး
စတာတွေအပေါ်မှာလည်း စိုးရိမ်တ့အကြောင်း အခုလို ပြောဆိုသွားပါတယ်။
“အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် အိုးအိမ် ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့ အခြေအနေမဲ့ရသူတွေရ့ ဒုက္ခတွေကို ကျနော် ကိုယ်တိုင် တွေ့ခ့ရပါတယ်။
ဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးက လူထုကို စာနာကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားလိုပါတယ်။”
“နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ မိမိရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်နက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ အားလုံးရဲ့ အခွင့်အရေးကို
အကာအကွယ်ပေးဖို့ ၀တ္တရား ရှိတယ်ဆိုတာကို မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေတင်မကဘဲ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေကပါ အသိအမှတ်ပြု
လိုက်နာကြဖို့ ကျနော် တိုက်တွန်းပါတယ်။”
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် အပါအ၀င် အစိုးရ၀န်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း တွေ့ဆုံပြီး
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ သောကြာနေ့က နေပြည်တော်ကို သွားရောက်ပြီး အစိုးရ ၀န်ကြီးတွေ၊ လွှတ်တော် ရေးရာ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့
တွေ့ဆုံပြီး မနေ့က စနေနေ့ကတော့ ရန်ကုန်က မထွက်ခွာခင်မှာ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခ့တာပါ။
မစ္စတာ ကင်တားနား အနေနဲ့ ဒီခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အရပ်ရပ်အပေါ် အကဲခတ် စမ်းစစ်ချက်တွေနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ရှေ့လမှာကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကို တင်သွင်းဖို့ ရှိပါတယ်။
DHAKA (AFP) - Doctors Without Border (MSF) Saturday urged Dhaka to reconsider its ban on providing aid
to Myanmar’s Rohingya refugees, saying the humanitarian consequences of the decision will be “devastating”.
Bangladesh this week ordered three global charities including France’s MSF and Action Against Hunger (ACF)
and Britain’s Muslim Aid to stop providing aid to Rohingyas who cross the border to flee persecution and
violence in Myanmar.
It has accused the organisations of serving undocumented Rohingya refugees, alleging that medical, food,
drinking water and training facilities run by the charities are encouraging an influx of Rohingya to the country.
The NGO Affairs Bureau, which isawing under the prime minister’s office, accused MSF of “damaging the
image of Bangladesh by running negative news in the international media” about difficult conditions faced by
The MSF said it was “shocked” at the order and said around 100,000 people risk losing access to lifesaving
healthcare in the southeastern Cox’s Bazaar district asaconsequence.
“To be forced to leave our patients is unthinkable and the repercussions life threatening,” said MSF operational
manager for Bangladesh, Chris Lockyear. “We are astounded at being requested to cease our medical activities
and deprive people of lifesaving services. We can only hope that the Bangladeshi government will re-consider,”
Lockyear added. MSF has been runningahealth centre in Cox’s Bazaar since 1992, which provides
comprehensive medical aid to some 5000 people — both Rohingyas and locals — every month, just under half
of whom are children under five years.
By ASSOCIATED PRESS| August 5, 2012 |
RANGOON — A United Nations human rights expert called
Saturday for an urgent independent investigation into recent
bloody sectarian violence in western Arakan State of Burma
which he said was one of many human rights challenges facing
Tomas Ojea Quintana endedaweeklong visit to Burma saying
that the country’s much-touted democratic reforms will not take
hold unless the government places human rights at the center of its agenda for change.
Duringatwo-day tour of Arakan state, Quintana said he witnessed “widespread suffering” from the June
violence between Arakan Buddhists and Muslim Rohingya that left at least 78 dead and tens of thousands
homeless. He said he recorded allegations of “serious human rights violations” by police and security forces
including killings, torture, arbitrary arrest and excessive use of force.
UN Special Human Rights Rapporteur Tomas Ojea Quintana talks to reporters during his news conference before his
departure at Yangon International Airport on Saturday. (PHODTO: Soe Zeya Tun / Reuters)
“The human rights situation in Rakhine [Arakan] state is serious,” he told reporters. He did not discuss the target
of the alleged abuses.
New York-based Human Rights Watch has accused government forces of opening fire on crowds of Rohingya
and committing other “atrocities” during attempts to restore order.
“It is of fundamental importance to clearly establish what has happened in Rakhine state and to ensure
accountability,” Quintana told reporters before leaving from Rangoon’s airport. “Reconciliation will not be
possible without this. Exaggerations and distortion will fill the vacuum to further fuel distrust and tensions
He said it wasa“matter of urgency” to set up an independent and credible investigation into the allegations of
Much remains unknown about what transpired in Arakan State during nearly two weeks of sectarian fighting,
rioting and arson attacks between the two groups because the area was virtually sealed off to the outside world.
Tensions between the Arakanese Buddhists and Muslim Rohingya are longstanding, in part because many in
Burma consider the Rohingya to be illegal settlers from neighboring Bangladesh. The United Nations says there
are about 800,000 Rohingya in Burma and considers them to be among the most persecuted people in the world.
Quintana also expressed “serious concern” about the treatment of six U.N. workers who were detained in Arakan
State. They were accused by Burmese authorities of taking part in the violence and setting fire to villages —
accusations Quintana said he believes are unfounded.
Quintana’s visit to Burma also focused on making an overall assessment of the human rights situation as the
country moves downareformist path under President Thein Sein after decades of repressive military rule. He
met with opposition leader Aung San Suu Kyi, government officials, lawmakers and others.
Quintana said there was reason to be encouraged by some recent changes but pointed out the issue of political
prisoners as an enduring obstacle to true democratization.
“I must, therefore, once again call for the release of all prisoners of conscience without conditions or delay,” he
said. “National reconciliation and democratic transition cannot move forward without these necessary steps.”
"Daily News on August 05_ 2012"
Daily News on August 14_ 2012